ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံး အဏ္ဏဝါထိန်းသိမ်းရေး နယ်ဧရိယာအဖြစ် နံ့သာကျွန်း(ကျွန်းနံ့သာ)ကို သတ?? - Yangon Media Group
ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံး အဏ္ဏဝါထိန်းသိမ်းရေး နယ်ဧရိယာအဖြစ် နံ့သာကျွန်း(ကျွန်းနံ့သာ)ကို သတ??
စစ်ကိုင်း၊ ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
ရခိုင် ပြည်နယ်၏ ပထမဦးဆုံး အဏ္ဏဝါ ထိန်းသိမ်းရေးနယ်ဧရိယာ(MPA)အဖြစ် နံ့သာကျွန်း(ကျွန်းနံ့သာ) ကို သတ်မှတ်နိုင်ရေးစတင်လေ့လာ မှုများ ပြုလုပ်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း (RCA) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်ကြည် က ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက်တွင် ပြော သည်။
အဆိုပါ နံ့သာကျွန်း(ကျွန်းနံ့ သာ)သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျိန္တလီ မြို့ရဲ့ အနောက်မြောက်ယွန်းယွန်း ငပလီမှ အနောက်တောင်ယွန်း ယွန်း (၂၆)မိုင်ခန့်အကွာတွင် တည် ရှိပြီး အဏ္ဏဝါထိန်းသိမ်းရေးနယ် ဧရိယာ (MPA) အဖြစ်တည်ထောင် နိုင်ရန်အတွက် ကနဦးလေ့လာ ဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းများကို WCS မှ ပညာရှင်များ၊ RCA အဖွဲ့ဝင်များ၊ KIFCA အဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ ပူးပေါင်းပြီး ကနဦးလေ့လာမှုများ သွားရောက်လေ့လာမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ကြောင်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း သဘာ ဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အ သင်း (RCA) မှ သိရသည်။
ဒေါက်တာ မောင်မောင် ကြည်က ”သွားရောက်လေ့လာမှု များအရကတော့ အဆိပ်ချတဲ့ ငါး ဖမ်းနည်းလိုဟာမျိုး၊ တရွတ်ဆွဲပိုက် လိုဟာမျိုးတွေကြောင့် ငါးအပါ အဝင် သန္တာကျောက်တန်းတွေက တော့ ပျက်စီးနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာက ရှားပါးလာပြီဖြစ်တဲ့ ငါး မန်းနဲ့ ငါးလိပ်ကျောက်သားပေါက် တွေတော်တော်များတယ်လို့လည်း ရေလုပ်သားတွေဆီက တစ်ဆင့် သိရတယ်။ ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေ လုပ်လိုက်မယ်လိုရင်တော့ လိပ် ကျောက်၊ ငါးမန်းထိန်းသိမ်းရေးအ တွက်လည်း ကောင်းသွားမယ်။ နောက် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်လိုက် ရင် ငါးသယံဇာတတွေ တိုးပွားလာ မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ကျွန်းကိုသွားရောက် လေ့လာမှုပြုလုပ်ခဲ့ရာတွင် ကျွန်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရေအောက်သယံ ဇာတများကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ လေ့လာခြင်း၊ ရေလုပ်သားများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သယံဇာတဆိုင်ရာမြေပုံ များပြုလုပ်ခြင်း အပါအဝင် ကနဦး လေ့လာမှုများစွာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သား ငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(မြန်မာနိုင်ငံ အစီအစဉ်)မှ Senior Strategy Marine Manager ဖြစ်သူ ဦးကျော် သင်းလတ်က ”ဒေသခံရေလုပ် သားတွေက အဲဒီနေရာက ငါးမန်း တွေ၊ ငါးလိပ်ကျောက်တွေ ကျက် စားရာနေရာဖြစ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီနေ ရာကို နိုင်ငံအဆင့် ထိန်းသိမ်းကာ ကွယ်မယ်ဆိုရင် အားလုံးအတွက် အကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုတာ တွေရှိတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီနေရာ ကို သွားရောက်ပြီး ကနဦးလေ့လာ တာဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်လေ့ လာမှုတွေ ဆက်လုပ်ဆောင်ရဦး မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကမ်းရိုးတန်း ဒေသများရှိ သဘာဝထိန်းသိမ်း ရေးနယ်မြေများမှာ လန်ပိအဏ္ဏဝါ အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ မော့စ်ကော့ ကျွန်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့ တော၊ မိန်းမလှကျွန်း တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော၊ သမီးလှကျွန်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော များဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ကဗျာဆရာနေစိမ့်၏ 'ဘက်တီးရီးယား စက်ရုံ' ကဗျာစာအုပ် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိ
ပုဇွန်တောင် မြစ်သုံးဆိုင်ထိပ်ရှိ ပြည်တော်သစ်အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစတင်ရန် ပိုင်တု?
အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးထက် လူထုကျပ်တည်းနေသည့် စီးပွားရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့က ပိုအရေး??
ရှစ်လေးလုံးပါတီ မှတ်ပုံတင်ပြီးနှစ်လအတွင်း ပါတီမူဝါဒ ကောင်းမွန်ရေးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြ?
၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်တာ အတွင်း မြန်မာ့ရေထွက် ပို့ကုန် တင်ပို့မှုမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၆၅?